Fact Check: အလှမယ်ထားထက်ထက်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သတင်းတု RFM ဖြန့်ဝေ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
လက်နက်ကိုင်တစ်ဖြစ်လဲ အလှမယ်ထားထက်ထက် မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီး အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ ရေးသားပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိပါတယ်။
သို့သော် ဒီသတင်းဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ အလှမယ် ထားထက်ထက်က မီဒီယာတစ်ခုကို သူဖြေဆိုထားတဲ့ အင်တာဗျူးကို ပုံမှားရိုက်ဖြန့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့ လူမှု ကွန်ယက်က တစ်ဆင့် အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
“သူပုန်ကို ကယ်တင်ရှင်ဆိုပြီး အားကိုးတဲ့ ထားထားထက်တို့ သူရဲကောင်းအဖွဲ့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ? ဒါ့ကြောင့်ပြောတာ၊ပျက်စီးချိန်တန်ရင် အတွေးမှားတယ် လို့။ဖင်ပိတ်ငြင်းကြအုံးလေ။ထို့အတူ အပြောကြီး ဟိတ်ဟန်ကောင်းတဲ့ CRPG NUG GZ PDF CDM စတဲ့ အရေခြုံတွေကို ယုံမိရင်လည်း ဘာဖြစ်မလဲ? စဉ်းစားကြ အရမ်းမလုပ်နဲ့။”စသည်ဖြင့် ရေးသားပြီး“U Dham Mika”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူကမျှဝေထားပါတယ်။ ဒီလိုမျှဝေထားတဲ့ screenshot ဓာတ်ပုံတစ်ခုထဲမှာဆိုရင် ထားထက်ထက် မုဒိန်းကျင့်ခံရကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူကို ငိုယိုပြောနေတယ်လို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အလားတူရေးသားမျှဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ထားထက်ထက်ငိုနေတဲ့ ဓာတ်ပုံကို အဓိကကျတဲ့ စကားလုံးအချို့အသုံးပြုပြီးရှာကြည့်ရာမှာ Bloomberg Quicktake စာမျက်နှာမှာ ဇွန် ၃ ရက်က တင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုက ပြကွက်တစ်ခုကို screenshot ရိုက်ပြီးမျှဝေ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုထဲမှာပြောခဲ့တဲ့ စကားမှာ “မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွှမ်းတယ်။ သူတို့ ဘေးကင်းလုံခြုံစေချင်တယ်။ သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေ”လို့ ပြောရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုပါ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ သူဘာကြောင့် လက်နက်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ပြောပြနေတာဖြစ်ပါ တယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – Bloomberg Quicktake | Archive link
ဒီလိုပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပို့စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလှမယ်ဟောင်း ထားထက်ထက်က သူ့အနေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ လုံခြုံမှုရှိပါကြောင်း ဇွန် ၅ ရက်ကတည်းက ပြန်လည်ရှင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“ကျွန်မ ထားထက်ထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ လုံခြုံစွာ ရှိနေပါတယ်ရှင် … ကျွန်မရဲ့ သတင်းတခုခု တက်လာတဲ့ အခါတိုင်း တဖက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ သတင်းအမှားဖြန့်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သိက္ခာ နဲ့ အများရဲ့သိက္ခာကို တိုက်ခိုက်နေကြတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်…ကျွန်မရဲ့ နိုင်ငံတကာက အင်တာဗျူးထဲမှ ပုံအချို့ကို SS ရိုက် ၊ English လို video နဲ့ ဖြေထားတာကို နားမလည် ကိုယ်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ သတင်းပုံဖျက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တော်တော်များများ တွေ့လာရတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်အလွန်ယုတ်ညံ့တဲ့ လူတွေနဲ့ ကျွန်မတို့တွေ ရင်ဆိုင်နေရပါလားလို့ ပိုပြီး သတိထားမိပါတယ်ရှင်”စသည့်ဖြင့် ထားထက်ထက် ပြန်လည်ရှင်းလင်းထားပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – Htar Htet Htet | Archive link
Radio Free Myanmar အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပုံဖျက်၊ ပုံမှားရိုက်ပြီး သတင်းတု ဖြန့်ချိနေခဲ့တာကို Fact Crescendo က အချက်အလက်စိစစ်ထားတာကို ဒီလင့်ခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ထားထက်ထက် မုဒိန်းကျင့်ခံရတယ်၊ ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်ဟာလည်းမှားယွင်းပြီး ဓာတ်ပုံဟာ သတင်းမှားတစ်ခုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
Title:အလှမယ်ထားထက်ထက်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သတင်းတု RFM ဖြန့်ဝေ
Tagged Claim ReviewRFMထားထက်ထက်